SHURAAKO NALA NOQO
Ka faa'idayso abaalmarinada iyo mushqaadayaha tayada leh adigoo adeegsanaya IB, Affiliate ama White Label.
Ku kobci ganacsigaaga FXPRIMUS oo shuruudaha shuraakada ugu tartaka fiican ee suuqa sarifka lacagaha qalaad. Iyadoo la bixiyo khidamado joogto ah waqtigeeda ku haboon, shuraakadayu waxay sidoo kale ka faa’idaysan karaan qalabyada xayaysiiska tayada sare leh oo ka caawin doona inay macaamiil badan kusoo kasbadaan. Kula soco macamiishada qalabyada online-ka oo hel agabka ururiya macaamiisha. Waxaan ka shaqeynaa sidii aan u hubin lahayn in shurakaadayada qiimaha leh ay helaan shay kasta oo ay u baahan yihiin si ay u guuleystaan.
waqtigooda ku jaango’an
La socosho horumarsan
suuq-geynta ugu sareeya
kusoo biir FXPRIMUS dilaal ahaan (IB) oo hel caawimaada shaqaalaheena heeganka ah una xaqiijiyaan guushaada. Dilaalada waxaa loo hayaa adeegyo khaas ah oo ay kamid yihiin caawimaad gaar ah, adeegyada xayaysiiska oo la badali karo, la socoshada iyo lacag bixin joogto ah. La noqo shuraako, shirkad abaalmarino heshay oo macaamiishaadu ay aamini doonaan.
ilaa $10 doolar halkii lot ba
Lacag bixino waqtigooda ku jaango'an
helida aaladaha suuqgeynta
La socoshada dhaqdhaqaaqa oo horumarsan
Noqol DILAAL Hadda
Nagu soo biir oo ka faa'idayso shuruudaha shuraakada aad ku guulaysano ee ay bixiso FXPRIMUS. Ku kobci ganacsigaaga aaminaad, dilaalo la maamulo oo la socdo khidmadahaaga. Shuraakada FXPRIMUS waxa la siiya noocyo kala duwan oo xayaysiiyo ah, logo, agab xayaysiis si aad kor ugu qaado meheradaada.
Qorshayaasha khidmada ee heerarka kala ah
Nidaamka warbixinta iyo dhaqdhaqaaqa
Luuqado dhawr ah iyo library baahsan oo aaladaha xayeysiinta ah
Qiimaha khidamada oo sare
La noqo Shuraako HADDA
Hagaajinta waxqabadka ganacsigaaga adoo iskaashi la samaynaya FXPRIMUS as White Label Aynu wada qabano dhammaan hawsha adag adoo ka raaxaysanaya khidmadahaaga. Waxaan ku taageernaa mid kasta oo kamid ah White Labels (xayaysiinta magaca shirkadda) barnaamij abaalmarin ah, ay ku jiraan website shaqsiyeed, helitaanka qalabyo waxtar u leh macmiilka Ku kobci ganacsigaaga amaano, shirkad caalami ah, oo daawo koriinka macaashkaaga.
Xiriir la samee shirkad sumcad leh
Shaqaale Xirfad leh
Helitaanka MAM iyo La-taliyaasha Ganacsi ee Badeecadaha
La soco helitaanka khidmadahaaga